प्रिय टेक मार्केटरहरू: लाभहरू भन्दा मार्केटिंग सुविधाहरू रोक्नुहोस् | Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 21, 2010 बिहीबार, डिसेम्बर 18, 2014 Douglas Karr
पछिल्ला दुई हप्ताहरू, म बिस्तारै थपेको छु मार्केटिंग उपकरण नयाँ साइटमा। एउटा जबरदस्त चीज मैले याद गरें कि टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले बजार सुविधाहरू मनपर्दछ र बजार फाइदाहरूको लागि पूर्ण उपेक्षा गर्दछ।
विन्दु मा मामला को एक तुलना होHootsuite CoTweet बनाम ™:
CoTweet को मार्केटिंग तिनीहरूको घर पेज मा धक्का दिन्छ प्लेटफर्म प्रयोग गरेर फाइदा:
CoTweet एक प्लेटफर्म हो जुन कम्पनीहरूले ट्वीटरको प्रयोग गरेर ग्राहकहरूलाई पुग्न र संलग्न गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको ब्रान्डको निरीक्षण गर्नुहोस् - तपाईंको उत्पादनहरू, ब्रान्डहरू, कम्पनी र प्रतिस्पर्धीहरूका बारे कुराकानीको लागि सुन्नुहोस्। CoTweet तपाईंको ट्विटर "प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली" हो
मानिसहरूलाई तपाईंको कम्पनीमा संलग्न गर्नुहोस् - कर्तव्य मा रहेको काम साझा गर्नुहोस्। मार्केटिंग, PR र ग्राहक सेवा जस्तै कार्य क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरूको सामूहिक ज्ञान ट्याप गर्नुहोस्। कार्यहरू ट्र्याक गर्नुहोस् र अनुगमनहरू।
महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा फोकस गर्नुहोस् - जब तपाईंलाई कहिले हामफाल्नु पर्छ जान्नुहोस्। साधारण केस व्यवस्थापन मार्फत तपाईंको एक्सचेन्जहरू ट्र्याक गर्नुहोस्। कम्पनी घोषणा गर्न अद्यावधिक तालिका बनाउनुहोस्।
तपाईंको ब्रान्ड HUMAN राख्नुहोस् - स्वचालित रूपमा तपाईंको अपडेटहरूमा हस्ताक्षरहरू समावेश गर्दछ को कुरा गर्न को लागी पहिचान गर्न र कुराकानीहरू व्यक्तिगत राख्नुहोस्।
Hootsuite होम पेज मार्केटिंग सबै को बारे मा छ तिनीहरूको प्लेटफर्मको सुविधाहरू:
सामाजिक नेटवर्क नयाँ! - एकाधिक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन वा Ping.fm खाताहरू प्रबन्ध गर्न को लागी एक सजिलै इन्टरफेस को प्रबन्ध गर्नुहोस्।
आईफोन अनुप्रयोग नयाँ! - ट्वीटहरू अनुसूची गर्नुहोस्, सूचीहरू थप्नुहोस्, र HootSuite आईफोन अनुप्रयोगको साथ ट्र्याक तथ्या .्क
तथ्या Track्कहरू ट्र्याक गर्नुहोस् - तपाईंको साथीहरू, तपाईंको हाकिम, वा आफैंलाई आफैं लिंक गर्नुहोस् हाम्रो लि link्क तथ्या .्क र दृश्यका साथ।
ट्विटर नयाँ सूचिहरु! - तपाईंको अवस्थित सूचि आयात गर्नुहोस् वा नयाँ सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई HootSuite भित्रबाट प्रबन्ध गर्नुहोस्
टीम कार्यप्रवाह - HootSuite ले यो धेरै ट्विटर खाताहरूमा बहु प्रयोगकर्ताहरू प्रबन्ध गर्न सजिलो बनाउँदछ।
ब्रान्ड अनुगमन - व्यक्तिहरू अहिले तपाइँको ब्रान्डको बारेमा के भनिरहेका छन् पत्ता लगाउनुहोस्।
निजीकृत दृश्य - ट्याबहरू र स्तम्भहरूमा तपाईंको ट्विटर स्ट्रिमहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईले चाहानु भएको लेआउटलाई व्यक्तिगतकरण गर्नुहोस्।
अनुसूची ट्वीटहरू - HootSuite ट्वीट शेड्युलर प्रयोग गरी दिनको कुनै पनि समयमा तपाईका अनुयायीहरूलाई पौष्टिक सामग्री प्रदान गर्नुहोस्।
इम्बेड गरिएको स्तम्भहरू - HootSuite बाट एन्ड्रोइड कोड तपाइँको वेबसाइट मा सजिलै खोज स्तम्भहरू एम्बेड गर्न को लागी!
मात्र एक पटक गर्छHootsuite एक लाभ उल्लेख गर्नुहोस् ... र यो "तपाईंको मालिकलाई प्रभावित गर्नुहोस्"। साँच्चै? किन म तपाईंको प्लेटफर्म प्रयोग गर्न जाँदैछु? मलाई लाग्छHootsuite एक अद्भुत उत्पादन छ, तर तिनीहरू किन तिनीहरू "व्यावसायिक" छनौट गर्न को लागी संभावना शिक्षित गर्न आवश्यक छ जब यो कर्पोरेट ट्विटर प्लेटफर्मको लागि आउँदछ। तिनीहरूको प्रत्येक सुविधाहरूमा प्रश्न सोध्नुहोस् "किन?" ... ट्र्याक तथ्या statistics्क किन? किन मेरो ब्राण्ड मोनिटर गर्दछ? तालिका तालिका किन? कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ?
मलाई गलत नबनाउनुहोस्, त्यहाँ खास खरीददारहरू छन् जुन सुविधाहरू खोज्दैछन् जुन तपाईंलाई प्रतिस्पर्धामा किनार दिनेछ - तर ती सुविधाहरू पृष्ठमा राम्ररी चिन्न सकिन्छ जुन फेला पार्न र पढ्न सजिलो हुन्छ। मलाई विश्वास छ कि तुलना चार्टले सब भन्दा राम्रो काम गर्दछ।
तपाईंको गृह पृष्ठ र मार्केटिंग सामग्री तपाईंको प्लेटफर्म प्रयोगको फाइदाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुविधाहरू पृष्ठमा सुविधाहरू राख्नुहोस्!
टैग: लाभcotweetविशेषताहरुhootsuiteमार्केटिङअनलाइन मार्केटिंग
जनवरी 21, 2010 मा 10: 28 एएम
डगलस, ठीक छ भने। यो अवधारणा मौलिक छ, तर सबै प्राय: बेवास्ता गरियो।
म दैनिक बजार उपभोक्ता वस्तुहरू बिग-बक्स रिटेलरहरूमा काम गर्दछु, ठूलो रूपमा गैर-प्रेरणा खरीदका साथ कोटीहरूमा, र प्रतिस्पर्धा र उत्पादनहरू बीच धेरै थोरै भिन्नता।
उदाहरणको लागि एक स्टूल मार्केटिंगको लागि लिनुहोस्। धेरै जसो कम्पनीहरूले उनीहरूका सुविधाहरूको लाभ उठाउँछन्; एल्युमिनियम फ्रेम, ठूलो प्लेटफर्म चरण, र एक-हात लक। जबकि ती मार्केटिंग हुनु पर्छ यसको फाइदाहरू; हल्का वजन, सुरक्षित र स्थिर, र प्रयोग गर्न सजिलो।
यो एक सरल अवधारणा हो, तर मार्केटिंग को सबै प्रकार, र / वा बजार को लागी भारी नै प्रभावकारी।
जनवरी १, २०१ 21 १२::2010 अपराह्न
यस्तो देखिन्छ कि उत्पादन विपणकहरू उनीहरूको "कूल नयाँ प्रविधि" सँग यस्तो प्रेममा पर्दछन् कि उनीहरू पूर्ण रूपमा बिर्सन्छन् कि अन्त प्रयोगकर्ताले मतलब गर्दैन।
धेरै टेक व्यवसायहरुमा एक व्यर्थ छ। उनीहरूले बिस्तारै "म के गर्न सक्छु हेर्नुहोस्" भनेर चिच्याउनु हुँदैन, सोध्नुको सट्टा "म कसरी म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु?"
यो एक उत्तम पोष्ट हो। यी उदाहरण साझा गर्न को लागी धन्यवाद।
ग्रेगरी, तपाईले यो भन्दा राम्रो भन्न सक्नुहुन्न। र म पनि त्यहि पापको दोषी छु! मैले भर्खरै मार्केटिंग टेक विक्रेताहरू सुरू गरें र साथी जिम ब्राउनको पहिलो प्रश्न थियो, "म यो केको लागि प्रयोग गर्छु?" दोह! मैले अझै भर्बिज सही पाइनौं तर ऊ सहि थियो!
तपाईको ब्यापारको लागि कुञ्जी भिन्नकर्ता जस्तो लाग्न सक्छ तपाई, मार्क! धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिभा माथि राख्दैनन् - तर त्यो त्यस्तो चीज हो जुन इन्टर्प्राइज व्यवसायहरूले धेरै ध्यान दिन्छन्!
जनवरी 22, 2010 मा 5: 11 एएम
डगलस, तपाईं हाकिम हुनुहुन्छ, गम्भीरतापूर्वक। मैले यो समय-समयमा पढ्ने गर्छु, यो मेरो मुख्य काम होईन, तर म जहिले पनि केही प्रेरणादायक पोस्ट पाउँछु, जस्तो कि। धन्यवाद र राम्रो काम!
HootSuite बाट DaveO
जनवरी १, २०१ 22 १२::2010 अपराह्न
DaveO यहाँ - HootSuite मा भर्खरको minted समुदाय Wrangler - तपाइँ एक महान बिन्दु बनाउनु भनेर चिमिंग। वास्तवमा 'उपकरण निर्माण कम्पनीहरूको लागि ईन्जिनियरिंगको प्रेममा पर्न को लागी सजिलो छ र प्रयोगको लागि वास्तविक विश्व परिदृश्यहरू बेवास्ता गर्दछ - यो विशेष गरी स्टार्ट-अपको शुरुआती दिनमा सत्य हुन्छ जब सबै उर्जा इटरेटिंगमा लक्षित हुन्छ जुन सुविधाको वरिपरि विनिमय हुन्छ। कार्यहरू
म अन्य सामाजिक मिडिया अभियानको लागि उपकरण प्रयोग गरे पछि HS मा सामेल भएँ त्यसैले फाइदाहरू राम्ररी जान्नुहोस्। म यहाँ बसोबास गर्ने क्रममा, तपाईले विभिन्न शैक्षिक सामग्री र राम्रो अभ्यासहरू देख्न पाउनुहुनेछ यी सुविधाहरू हाइलाइट गर्न, र ती सुविधाहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएका सुविधाहरू प्रदर्शन पनि गर्नुहोस्।
हामी कसरी विकसित हुँदै जान्छौं हेर्नको लागि हेर्न जारी राख्नुहोस् र हाम्रो कथा फैलाउनको लागि धन्यवाद। कुनै पनी अन्य विचारहरु वा रायहरु संग मलाई @ daveohoots मा ping गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
PS मेरो बारेमा अधिक जानकारीको लागि (बेशर्म मलाई थाहा छ ;-)), कृपया भ्रमण गर्नुहोस्:
बधाई नयाँ Digs मा DaveO! तपाईं अचम्मको उत्पादनको साथ कम्पनीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई विशेष गरी तपाईंको आईफोन अनुप्रयोग मन पर्छ, म यो बजार मा सबै भन्दा राम्रो हुन विश्वास गर्दछ। आशा छ कि तपाईं आफ्नो वेब मार्केटिंग टीम को लागी यो पोस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ कि यसले तपाईंलाई उद्यम बजारको प्रवेशलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
बाहिर आएर प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद - यसले HootSuite को बारेमा धेरै कुरा भन्छ! 😀
धेरै धेरै Guillem धन्यवाद! जब म यी उत्पादनहरू अनुसन्धान गर्दै थिएँ, मैले सोच्यो कि यो ट्रोल हो
दयालु शब्दहरु को लागी धेरै धन्यवाद, गुइलम!